तपाईलाई थाहा छ ? मापसे गर्न फेसबुकमा पनि मनाही छ « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
तपाईलाई थाहा छ ? मापसे गर्न फेसबुकमा पनि मनाही छ
३ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०६:५८
फेसबुकमा तपाईंले के गर्नुहुन्छ वा के लेख्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईंको व्यक्तित्वको परिचय दिन्छ । तसर्थ फेसबुक खोल्नासाथ आफू को हुँ भनेर सोच्नुहोस् र फेसबुक चलाउनुहोस् । यहाँ फेसबुक नियमित चलाउनेहरुका लागि केही सुझाव हेर्नुस् :
प्रकाशित : ३ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०६:५८